काठमाडौंको भित्री नेवार बस्तीमा केशव स्थापित, सिर्जना सिंह र बालेन शाहमध्ये को बलियो? :: सेतोपाटी टिम :: Setopati
उपमेयरमा सुनिता डंगोलको सम्भावना बलियो
स्थानीय चुनावको तापक्रम बढ्दै जाँदा संघीय राजधानी काठमाडौंको मेयरमा जनताले कसलाई छान्छन् भन्ने चासो बढ्दै गएको छ।
यसपालि राजधानीवासीका मुख्य चासो र मुद्दा के हुन् र उनीहरू त्यो चासो पूरा गर्न कसलाई मेयरको नेतृत्वमा पुर्‍याउन चाहन्छन्? अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका मुख्य उम्मेदवारहरूबारे मतदाताको धारणा के छ? यिनै प्रश्न लिएर सेतोपाटी टिमले काठमाडौंका मतदाताको घरटोलमा पुगेर कुरा गर्न सुरू गरेको छ।
पहिलो चरणमा हामीले टेकुदेखि ठमेल र भीमसेनस्थानदेखि असनसम्म फैलिएको काठमाडौंको मुख्य नेवार बस्तीका २०० मतदातासँग भेटेर कुराकानी गरेका छौं।
हामीले टेकु, त्रिपुरेश्वर, भोटेबहाल, गणबहाल, लगन, ब्रह्मटोल, झोछेँ, वसन्तपुर, मरू, भीमसेनस्थान, यट्खा, इन्द्रचोक, असन, बांगेमुडा, नरदेवी, क्षत्रपाटी, ठमेल लगायत टोलका स्थानीय मतदातालाई भेटेर कुराकानी गर्‍यौं। हामीले भेटेका २०० मतदातामध्ये ६२ जनाले (३१ प्रतिशतले) नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितलाई भोट दिने बताए।
नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहलाई ५१ मतदाता अर्थात २५.५ प्रतिशतले भोट दिने बताए भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई ३६ जना अर्थात १८ प्रतिशत मतदाताले भोट दिन्छु भने।
त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदनदास श्रेष्ठलाई १५ जनाले, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमिलाई १० जनाले र विवेकशील साझाकी उम्मेदवार समीक्षा बाँस्कोटालाई २ जनाले भोट दिने भेटिए।
हामीले गत बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन लगाएर काठमाडौं कोर-सिटीका मतदातासँग कुरा गरेका थियौं। त्यो बेलासम्म हामीले कुरा गरेका २०० जनामध्ये २४ जना अर्थात १२ प्रतिशतले कसलाई मत दिने टुंगो लागिनसकेको बताएका थिए।
काठमाडौं कोर-सिटीमा वडा नम्बर ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६ र २७ वडा पर्छन्। कुनै वडा पूरै कोर-सिटीमा पर्छ भने कुनैले आंशिक रूपमा मात्र कोर-सिटीलाई छुन्छ। यी वडामा जम्मा ७९ हजार ८ सय ६५ मतदाता छन्। विगतमा करिब ७० प्रतिशत भोट खस्ने गरेको पाइन्छ। यसपालि पनि यो दर कायम रह्यो भने ५५ हजारभन्दा बढी भोट खस्ने छन्।
अब हामी काठमाडौं 'कोर सिटी' का मतदाताले भनेका कुरा, पाँच वर्षअघिको चुनावमा यहाँका उम्मेदवारले पाएको मत र यी बस्तीमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावलाई सँगै राखेर विश्लेषण गरौं।
नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा सधैं नै एमाले र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। त्यसमाथि यहाँ एमाले सबभन्दा बलियो दल हो। पछिल्लो चुनावी परिणामले यही देखाउँछ।
यसपालि पनि हामीले कुरा गरेका मतदातामध्ये सबभन्दा धेरै ३१ प्रतिशतले एमाले उम्मेदवार स्थापितलाई नै भोट दिन्छु भनेका छन्। तर उनले अघिल्लोचोटि विद्यासुन्दर शाक्यले ल्याएजति मत कोर-सिटीबाट ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन्? यो मुख्य प्रश्न हो।
पाँच वर्षअघिको चुनावमा एमाले मेयर उम्मेदवार शाक्यले नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीलाई झन्डै २० हजार मतले हराएका थिए। त्यतिखेर काठमाडौंका यिनै मुख्य नेवार बस्तीहरूबाट विद्यासुन्दरले आफूभन्दा १२ हजार बढी मत ल्याएको जोशी बताउँछन्।
एमाले नेता तथा सांसद रामवीर मानन्धरले पनि एमालेले त्यो बेला कोर-सिटीबाट १२ हजार बढी मत ल्याएको पुष्टि गरे।
यसरी कोर-सिटीको नेवार समुदायबाट कम मत पाएकै कारण जोशीले कांग्रेसकै उपमेयर हरिप्रभा खड्गीभन्दा कम मत ल्याएका थिए। खड्गीले ५८ हजार भोट ल्याउँदा जोशीले ४५ हजार मात्र पाएका थिए। शाक्यले मेयरमा पाएको ६५ हजार भोट उपमेयरमा खड्गीले पाएभन्दा ७ हजार जति मात्रै धेरै हो।
'त्यति बेला भित्री बस्तीबाट मलाई धेरै भोट आएन,' जोशीले सेतोपाटीसँग भने, 'समुदायको धेरै भोट विद्यासुन्दरलाई गयो, त्यसैले मैले हारेँ।'
यसपालि कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले कोर-सिटीबाट अघिल्लोपटक जोशीले ल्याएभन्दा धैरै मत ल्याउने छिन्। मतदाताले हामीसँग गरेको कुराकानीमा त्यो प्रस्टै देखिन्छ।
हामीले २०० जनासँग कुरा गर्दा यसअघि विद्यासुन्दरलाई भोट दिएका मतदातामध्ये १९ जनाले यसपालि सिर्जनालाई भोट दिन्छु भनेका छन्। तर यसअघि कांग्रेसलाई दिएर यसपालि एमालेलाई दिन्छु भन्नेको संख्या जम्मा २ जना देखियो।
अघिल्लोपटक एमालेलाई भोट दिएर यसपालि कांग्रेसलाई दिन्छु भन्ने सबै एमालेका परम्परागत मतदाता होइनन्। तीमध्ये कतिपयले आफू कांग्रेस भए पनि अघिल्लोपटक शाक्यलाई हेरेर मत दिएको बताए। वडा नम्बर २१ का कृष्ण श्रेष्ठ त्यस्तै एक मतदाता हुन्।
'म पहिलेदेखि नै कांग्रेस हुँ तर यसअघि विद्यासुन्दरलाई दिएको थिएँ किनभने ऊ मेरै छिमेकी हो। यसपालि कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई भोट दिन्छु,' उनले भने।
त्यस्तै, वडा नम्बर २३ झोछेँका देवराज भट्ट पनि पहिलेदेखि कांग्रेसलाई नै भोट दिन्थे। तर अघिल्लोचोटि उनले शाक्यलाई भोट दिए।
'यसपालि म सिर्जना सिंहलाई चान्स दिन चाहन्छु। सिर्जना पहिल्यैदेखि राजनीतिमा थिइन्। उनी राजनीतिक परिवारको भएकाले काम गर्ने तौरतरिका थाहा होला भन्ने लाग्छ,' उनले भने, 'उपमेयरमा चाहिँ सुनिता डंगोललाई दिने हो। उनको भिजन मनपर्‍यो।'
यसले अघिल्लोचोटि एमालेलाई गएको कांग्रेसको भोट यसपालि सिर्जना सिंहले फर्काउने देखाउँछ। गठबन्धनका कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीका केही भोट पनि कांग्रेसलाई आउँछ। तर यी दुवै दल काठमाडौंको कोर-सिटीमा बलियो देखिन्नन्। हामीले समाजवादी र माओवादीका जम्मा एक-एक जना मतदाता भेट्यौं। उनीहरू दुवैले कांग्रेसलाई मत दिने बताए।
यसरी हेर्दा अहिले पनि काठमाडौंको कोर-सिटीमा केशव स्थापित नै बलिया देखिन्छन्। उनलाई सिर्जना सिंहले अघिल्लोपटक एमालेमा गएको भोट तानेर चर्को दबाबमा भने पारेकी छन्।
एमालेका परम्परागत मतदाताको ठूलो हिस्साले भने स्थापितलाई नै भोट दिने पक्का छ। त्यसैले कोर-सिटीमा अझै पनि उनी सबभन्दा अगाडि देखिन्छन्।
वडा नम्बर १५ का प्रकाश श्रेष्ठ सधैं एमालेलाई भोट दिँदै आएका व्यक्ति हुन्। अहिले पनि उनले स्थापितलाई भोट दिने बताए।
'काम गर्छ। हाट्टहुट्ट गर्छ। हुन त विवादमा पनि आइरहन्छ। अहिले पनि उनीमाथि धेरै आरोप छन् तर काम गर्छ कि गर्दैन हेरेर भोट हाल्ने हो। उनले काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने।
कोर-सिटीमा स्थापित र सिंहबीचको मतान्तर कति हुनेछ भन्ने अन्तिम फैसला अझै पनि कसलाई मत दिने निर्णयमा नपुगेका मतदाताले गर्नेछन्। शुक्रबार साँझसम्म हामीले कुरा गरेका १२ प्रतिशत मतदाताले कसलाई मत दिने अझै निर्णय गरिनसकेको बताएका थिए।
अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसकेका मतदातामध्ये ७ प्रतिशत अघिल्लो चुनावमा एमालेलाई मत दिएका थिए भने साढे तीन प्रतिशतले कांग्रेसलाई दिएका थिए। त्यस्तै, साढे एक प्रतिशतले विवेकशील र साझा पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिएका थिए।
काठमाडौंमा यसपटक धेरै चर्चा पाएका उम्मेदवार बालेन शाह हुन्। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गायक शाहले तेस्रो धेरै अर्थात १८ प्रतिशत मत ल्याउने छन्।
हामीले गरेको कुराकानीमा बालेनलाई भोट दिन्छौं भन्नेहरू ३६ जना थिए। तीमध्ये २६ जनाले यसअघि एमालेलाई भोट दिएको बताए भने ५ जनाले कांग्रेसलाई र बाँकी ५ जनाले साझा र विवेकशीललाई भोट दिएको बताए।
बालेनलाई मत दिने मतदातामध्ये यसअघि एमालेलाई दिएका किन धेरै छन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ। किनभने, अघिल्लो चुनावमा विवेकशील र साझालाई मत दिनेमध्ये क्रमश: ७० र ६० प्रतिशत परम्परागत रूपमा कांग्रेसका मतदाता थिए। पाँच वर्षअघि हामीले गरेको 'एक्जिट पोल' ले त्यही देखाएको थियो।
गएको स्थानीय चुनावले नै स्वतन्त्र उम्मेदवार वा नयाँ पार्टीमाथि आकर्षित हुने काठमाडौंका मतदाताको ठूलो पंक्ति छ भन्ने देखाएको थियो। उक्त निर्वाचनमा रञ्जु दर्शना र किशोर थापाले काठमाडौंमा ४३ हजार अर्थात २७ प्रतिशत मत ल्याएका थिए।
कोर-सिटीमा बालेनले यसअघि विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाले पाएको मतमा सुधार ल्याउन सक्छन्। त्यो बेला उनीहरूले कोर-सिटीबाट ५-७ हजार मात्र मत ल्याएको राजुराज जोशी बताउँछन्।
यसपालि बालेनप्रति आकर्षण देखिँदा सबभन्दा ठूलो घाटा विवेकशील साझामाथि परेको देखिन्छ। हामीले कुरा गरेकामध्ये दुई जनाले मात्र विवेकशील साझाकी उम्मेदवार समीक्षा बाँस्कोटालाई भोट दिन्छु भने।
यसअघिको चुनावमा विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना काठमाडौंका मतदाताको आकर्षण थिइन्। भित्री बस्तीमा जाँदा युवादेखि बूढाबूढीसम्मले उनका कुरा गर्थे। बालेनको चर्चा भने धेरैजसो युवाहरूमाझ देखिन्छ। त्यसबाहेक दलहरूले काम गरेनन् भनेर असन्तुष्ट मतदाताले पनि उनलाई भोट दिने देखिन्छ।
वडा नम्बर १९ मरूहितिकी बिनी कार्की दलका नेताहरू देखी दिक्क छिन्। त्यसैले बालेनलाई मत दिने निर्णयमा पुगेकी छन्।
उनले दलहरूप्रति आक्रोश पोख्दै भनिन्, 'यसअघि एमालेलाई दिएको हो। केही गरेन। देशमा दलहरूले भ्रष्टाचार मात्र गरे। यी नेताहरूले कति खान सकेका ! मर्नुपर्छ भन्दा त यस्तो छ, मर्नै नपर्ने भए के गर्थे होलान्!'
महँगी बढेकोमा पनि उनको आक्रोश छ, भनिन्, 'ती नेताहरूलाई लाज लाग्ने रहेनछ, आफू पैसा कुम्ल्याएर बस्ने अनि हामी जनतालाई यस्तो महँगीमा राख्ने? पैसा उनीहरू कमाउने महँगीमा हामी पर्ने?'
कोर-सिटीमा केही मत ल्याउने सम्भावना भएका अर्का स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार सुमन सायमि हुन्। उनलाई भोट दिन्छौं भन्नेहरू २०० मा १० जना भेटिए। धेरैजसो यी मतदाताले पहिले विद्यासुन्दरलाई भोट दिएको बताए।
सायमिले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार क्रममा घरबार गुमाएका रैथानेहरूको मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। खोकना, हरिसिद्धि, बालाजु लगायत ठाउँमा उनी आफैं भूमि अतिक्रमणको मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा ओर्लेका थिए। काठमाडौंमा नेवा: भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने उनको अर्को प्रमुख मुद्दा हो।
सुमनको अर्को विशेषता भनेको उनी कालिमाटीका चर्चित वामपन्थी नेता जीवनराम मानन्धरका छोरा हुन्। यसले पनि विगतमा एमालेले पाउँदै आएको केही भोट यसपालि सुमनलाई जाने देखिन्छ।
यसरी समग्र चुनावी दृश्य हेर्दा कोर-सिटीमा स्थापितको संख्या सबभन्दा धेरै देखिन्छ। तर उनका लागि चिन्ताका केही कारण पनि छन्। पहिले विद्यासुन्दर शाक्यले पाएजति भोट स्थापितले यहाँबाट पाउने छैनन्। शाक्यलाई भोट दिएका कांग्रेसका परम्परागत मतदाता सिर्जना सिंहले फिर्ता लाने छिन्। बालेन शाहले यसपालि कांग्रेसको भन्दा एमालेको धेरै भोट लैजाने देखिन्छ। सुमन सायमिले पनि एमालेकै भोट काट्नेछन्।
अघिल्लोपटक राप्रपा र एमालेबीच गठबन्धन थियो। एमालेले मेयर र राप्रपाले उपमेयर उठाएका थिए। यसपालि राप्रपाले आफ्नै मेयर उठाएको छ। हामीले कुरा गरेका मतदातामध्ये ७.५ प्रतिशतले राप्रपाका मेयर उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठलाई भोट दिने बताएका छन्। त्यसैले मतदानको अन्तिम दिनसम्म कोर-सिटीमा स्थापितको मत थप घट्यो भने त्यो उनका लागि चुनौती हुनेछ।
उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डंगोल धेरै सुरक्षित देखिन्छिन्।
स्थापितले पाउने मत त सुनिताले त्यसै पनि पाउने छिन्, त्यसबाहेक सिर्जना सिंह र बालेन शाहलाई मेयरमा मत दिने कतिपय मतदाताले उपमेयरमा सुनितालाई नै भोट दिने बताए।
यो पनि पढ्नुहोस्- चुनाव नजिकिँदै जाँदा भरतपुरमा रेनु दाहाल बलियो कि विजय सुवेदी?
हामीले कुरा गरेकामध्ये १५ जना प्रतिनिधि मतदाताको भनाइ तल जस्ताको तस्तै राखेका छौं।
कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (किलागल, कामनपा- १८)
यसपालि केशव स्थापितलाई भोट दिने हो। पहिले काम गरेको मान्छे हो। होहल्ला गर्छ, घमण्ड धेरै गरेको छ तर गफ पनि गर्छ, काम पनि गर्छ। पहिला विद्यासुन्दरलाई दिएको हो। उसलाई पनि काम गर्ला भनेरै दिएको हो। हाम्रो वडामा त काम पनि गरेको छ। राम्रो छ।
राजीवमान सिंह (भोटेबहाल, कामनपा-११)
मैले यसपालि मेयरमा सिर्जना श्रेष्ठ र उपमेयरमा सुनिता ढंगोललाई भोट दिने हो। महिलाले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, इमानमा बस्छन् भन्ने लाग्छ। त्यसैले उनीहरूलाई भोट दिन मन छ। महिलाले काम पनि गर्लान्, भ्रष्टाचार पनि कम होला। महानगरमा थिति बस्ला।
यसअघिको चुनावमा विद्यासुन्दर उठेको थियो। ऊ र म एउटै स्कुलमा पढेको। साथीजस्तो मान्छे उठेपछि भोट नदिने कुरै भएन। भोट दिएर जिताएपछि पछिल्लो पाँच वर्षमा ऊ यही बाटो हिँड्दा पनि एकफेर बोलेन। यो कुरा मलाई चित्तै बुझेन। काम पनि खासै केही गरेन।
गीता डंगोल श्रेष्ठ (ब्रह्मटोल, कामनपा-१२)
यसपालि भोट बालेनलाई दिने। नयाँ अनुहार हो, पढेलेखेको मान्छे रहेछ। मैले इन्टरभ्यू हेरेपछि उसको कुरा गराइ पनि मन पर्‍यो। काम पनि गर्ला। यसअघि एक त नेवार हो त्यसमाथि काम गर्ला भनेर विद्यासुन्दरलाई दिएको। आफ्नै घरअगाडिको खाल्डो पनि पुर्न सकेन। मेयर भएपछि विरोध भए पनि काम गर्न र आफ्नो कुरा बोल्न सक्नुपर्थ्यो। तर सकेन।
राजेश श्रेष्ठ (झोछेँ, कामनपा-२३)
यसपालि कसलाई भोट दिने निर्णय गर्न सकेको छैन। परिवारको दबाब एकातिर हुन्छ, आफ्नो मन अर्कोलाई दिऊँ भन्छ। परिवारले कांग्रेस भन्छ, मलाई बालेन मन परेको छ। पहिला पनि युवा भएकाले रञ्जुलाई दिएको हो। यसपालि पनि युवा भएकाले बालेन मन परेको छ। तर निर्णय गरेको छैन।
प्रवीनराज शर्मा (क्षत्रपाटी, कामनपा- १७)
अघिल्लोपटकको चुनावमा मैले मेयरमा विद्यासुन्दर श्रेष्ठ र उपमेयरमा हरिप्रभा खड्गीलाई भोट दिएको थिएँ। योपटक एमालेबाटै केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डंगोललाई भोट दिने सोचेको छु। स्थापितले पहिले राम्रै काम गरेकाले दिन लागेको हुँ। सुनिता भने नयाँ अनुहार भयो। कुराहरू पनि राम्रो र स्पष्ट गर्छिन्।
भूषण कायस्थ (क्षत्रपाटी, कामनपा- १७)
पछिल्लोपटक मैले विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र नेवाः भएको नाताले कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गीलाई भोट दिएको थिएँ। योपटक मेयरमा कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगोललाई भोट दिँदैछु। स्थानीय सरकारमा दुवै महिला भयो भने केही गर्लान् भन्ने लागेको छ। काम गर्दा दुवै महिलाको कुरा पनि मिल्ला।
गोपाल खड्गी (थँहिति, कामनपा- २५)
एमालेका केशव स्थापित अनुभवी भएर पनि एकदम गफाडी भए। त्यही भएर योपटक मेयरमा कांग्रेसका सिर्जना सिंह र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीलाई दिँदैछु।
शर्मिला महर्जन (संकटा मन्दिर चोक, कामनपा- २२)
हामीलाई त मेयर–उपमेयरभन्दा वडामा कसले राम्रो गर्ला भन्ने मतलब हुन्छ। त्यही भएर वडामा एमालेका चिनीकाजी महर्जन र कांग्रेस सदस्यमा चन्द्रमान तुलाधरलाई दिने सोचेको छु। उनीहरूले टोल सफा गर्ने, ढल, बत्ती, पानीको व्यवस्था गर्ने र कसैलाई सहयोग चाहिए तुरून्तै पुर्‍याउने काम गरेका छन्।
किरण कायस्थ (मासं गल्ली, कामनपा- २५)
मेयरमा बालेन शाहलाई दिन सकिन्छ। उसको भिजन राम्रो लागेको छ। हामीलाई त मेयर-उपमेयरभन्दा वडाध्यक्ष राम्रो हुनुपर्‍यो।
सुरेश थपा (किलागल, कामनपा- २४)
किलागलमा वर्षको चारपटक त बाटो बनाउँछ। अनि बनाएको हप्तादिनमै बिग्रन्छ। पहिलेका एमाले वडाध्यक्ष बाबुकाजी महर्जनको काम खासै चित्तबुझ्दो छैन। त्यसैले यसपटक मेयर-उपमेयर सबै भोट कांग्रेसलाई हाल्छु। कांग्रेसकी मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ठूलो कुराभन्दा सानो कुरा गरेकी छन्। बाटोघाटो खाल्डोरहित बनाउँछु भनेकी छन्। ठूलो कुराभन्दा सानो पत्याउने कुरा गरेकाले मलाई चित्त बुझेको छ। गणेशमानकी बुहारी हुनुका साथै उहाँको आफ्नै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि छ।
मैले पछिल्लो स्थानीय चुनावमा एमालेलाई भोट हालेकी थिएँ। पहिलेखि अहिलेसम्म उनले राम्रो काम गरेका छन्। यसपालि मेयरमा मदनदास श्रेष्ठलाई भोट हाल्ने सोचेको छु। यिनले केही गर्छन् भन्ने झिनो आशा छ। राम्रो गर्छ कि भन्ने छ तर पछि के गर्छ थाहा भएन। मेरो भाइ पनि राप्रपा नै भएकाले मेयरमा राप्रपालाई भोट हाल्छु। तर आशा गर्नु, भर नपर्नु भनेझैं हो।
मचाकाजी (जमल, कामनपा- २७)
पछिल्लो पाँच वर्षमा छनौट भएकाहरूले राम्रो काम गरे। यसपालि कांग्रेसलाई भोट हाल्छु। बुवाआमाले पहिलेदेखि कांग्रेसलाई भोट हाल्दै आएकाले यसपटक पनि उहाँहरूको कुरा सुन्दै रूखमा भोट हाल्छु। तर जसले जिते पनि भनेको बेला स्थानीयका लागि काम गर्नुपर्छ।
कपिल महर्जन (हनुमानढोका, कामनपा-१९)
म वडाध्यक्षमा कांग्रेसलाई भोट हाल्छु किनभने यो पार्टीले अहिलेसम्म राम्रो गरेको छ। मेयरमा भने केशव स्थापित र सिर्जना सिंहमध्ये एकलाई दिन्छु। यसपटक महिलालाई अवसर दिनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। घरगृहस्थी गर्ने मान्छे ठाउँमा पुग्यो भने राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्छ। जो आए पनि टोल-समाजको ठाउँ विकास गर्नुपर्‍यो, अप्ठ्यारो नपार्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो, फोहोर, पानी, तार व्यवस्थित पारिदिनुपर्‍यो। स्वतन्त्रलाई दिन मन नलाग्नुको कारण चाहिँ पार्टीले नगरेको बेला एक जनाले के गर्न सक्छ भनेर हो। तर परिवर्तनको बाटो अपनाउनुपर्छ भविष्यमा।
विकास अवस्थी (कामनपा- १६)
म एमालेलाई भोट हाल्छु। पहिले पनि एमालेलाई हालेको हो। राम्रो भनेर कसैलाई भन्दिनँ तर तुलनात्मक रूपमा एमाले राम्रो छ। स्वतन्त्रमा आएकालाई पार्टीसित दाँज्न पाइदैन। एक जना मात्र आएर हुँदैन। भिजन भएर पनि काम गर्न दिँदैनन्, सक्दैनन्। जितेको नेताले पनि समाजका लागि धेरै केही गर्नुपर्दैन। भएको पूर्वाधार व्यवस्थित गरे पुग्छ। टावर बनाएर हुन्न, जनताले आरामले काम गर्न पाए र काम गर्न लायक वातावरण बनाइदिए पुग्छ।
अर्जुन गजुरेल (असन, कामनपा- २५)
म एमाले हो पहिलेदेखि। अहिलेसम्म हेर्दा आशालाग्दो काम गरेको छ। कांग्रेसले केही गरेन। जनयुद्धले केही राम्रो गरेन। राजा हटायो, केही परिवर्तन आए तर खासै केही भएन। भोट खेर फाल्नुभन्दा एमाले ठूलो पार्टीलाई दिने हो। पार्टीबाट गयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, एक्लै काम गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा म मतादातालाई चिन्दिनँ तर एमालेलाई जिताउने हो, बहुमत पुर्‍याउने हो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २५, २०७९, १२:४५:००